Sida shucaaca loo sameeyo: astaamaha iyo noocyada | Saadaasha Hawada
Sida shucaaca loo sameeyo
Jarmal Portillo | 01/10/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 30/09/2021 19:30 | Dhacdooyinka saadaasha hawada
Bani -aadamka ayaa waligood la dhacsanaa danab. Waa dheecaan koronto oo dabiici ah oo awood leh. Waxay badanaa dhacdaa inta lagu jiro duufaannada korantada ee dhaliya garaaca elektromagnetka. Dheecaankan hillaaca waxaa weheliya soo baxa iftiinka oo la yiraahdo hillaac iyo cod la yiraahdo onkod. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ma oga sida shucaaca loo sameeyo.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa maqaalkan inaan kuu sheegno sida shucaaca loo sameeyo iyo maxay yihiin noocyada kala duwan ee sannadka.
2 Sida shucaaca loo sameeyo
3 Sida shucaaca loo sameeyo iyo noocyada kala duwan
Daadinta hillaaca waxaa weheliya soo -baxa iftiinka. Soo -daynta iftiinkaan waxaa la yiraahdaa hillaac waxaana sabab u ah marinka koronto ee ionizes molecules -ka hawada. Isla markiiba ka dib, cod la yidhaahdo Onkod ayaa ciyaaraya, oo ay soo saareen mawjado naxdin leh. Korontada la soo saaray waxay dhex martaa jawiga, waxay kululaataa jawiga, waxay sababtaa in hawadu si degdeg ah u fiddo, waxayna ka soo saartaa sanqad u gaar ah dhulka. Fallaadhuhu waxay ku jiraan xaalad Plasma.
Dhererka celceliska raajadu waa qiyaastii 1.500-500 mitir. Waxa xiiso leh, 2007, Biriqda ugu dheer ee la diiwaan galiyay ayaa ka dhacday Oklahoma, waxayna gaartay dherer dhan 321 kiiloomitir. Hillaacku wuxuu caadi ahaan ku socdaa celcelis ahaan xawaare dhan 440 kilomitir ilbidhiqsi kasta, ilaa 1.400 kiilomitir ilbidhiqsi kasta. Farqiga iman kara ayaa ah malaayiin volts oo aan la xidhiidho dhulka. Sidaa darteed, fallaadhahaasi waxay leeyihiin khatar sare. Qiyaastii 16 milyan oo duufaano hillaac ah ayaa sannad walba laga diiwaangeliyaa meeraha.
Waxa ugu badan ee caadiga ah ayaa ka mid ah noocyada kala duwan ee fallaadhaha, kuwaas waxaa soo saara walxo togan oo dhulka ku jira iyo walxaha xun ee daruuraha. Tan waxaa u sabab ah koritaanka toosan ee daruuraha loo yaqaan cumulonimbus. Marka daruurta cumulonimbus ay gaarto tropopause (aagga ugu dambeeya ee troposphere), kharashaadka togan ee daruuraha ayaa mas'uul ka ah soo jiidashada kharashyada taban. Dhaqdhaqaaqan kharashyada korontada ee jawiga ayaa sameeya falaadho. Badanaa waxay samaysaa saamayn hore iyo gadaal. Waxay tilmaamaysaa aragtida ah in walxaha si dhaqso ah u kacaan una soo noqdaan si ay iftiinka u soo dhacaan.
Hillaacku wuxuu dhalin karaa 1 milyan oo watt oo ah awood degdeg ah, taas oo u dhiganta qarax nukliyeer. Anshaxa u xilsaaran barashada hillaaca iyo wax kasta oo la xiriira saadaasha hawada waxaa lagu magacaabaa sayniska dhulka.
Sida shoogga korontadu ku bilaabmay ayaa weli ah arrin muran dhalisay. Saynisyahannadu weli ma awoodin inay ogaadaan waxa asalka u ah. Kuwa ugu caansan waa kuwa dhaha khalkhalka hawo -wadaagga ayaa sabab u ah asalka noocyada hillaaca. Carqaladahaan ku jira jawiga waxaa sabab u ah isbedelka dabaysha, huurka, iyo cadaadiska jawiga. Sidoo kale saamaynta dabaysha cadceeda iyo uruurinta qurubyada cadceedda ee la soo oogay ayaa laga wada hadlay.
Barafka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay qayb muhiim u ah horumarka. Tani waa sababta oo ah waxay mas'uul ka tahay kor u qaadista kala -soocidda kharashyada togan iyo taban ee daruurta cumulonimbus. Hillaac ayaa sidoo kale lagu soo saari karaa daruuraha dambaska ee ka qarxa fulkaanaha, ama waxay ka dhalan kartaa boodh ka imanaya dabka kaymaha ee rabshadaha leh oo dhalin kara qarash joogto ah.
Marka loo maleeyo soo -kicinta korantada, korontada waxaa loo malaynayaa inay waddo geeddi aan aadanuhu weli hubin. Kala saaridda eedeymaha waxay u baahan tahay hawo xoog leh oo kor u kacda, taas oo mas'uul ka ah in dhibcaha biyaha kor loo qaado. Sidan, marka dhibcaha biyuhu gaaraan meel sare oo hawada ku hareereysan ay qabow tahay, qaboojin degdeg ah ayaa dhici doonta. Caadi ahaan heerarkani waa kuwo la qaboojiyey heerkulkoodu yahay -10 iyo -20 digrii. Isku dhaca baraf -barafka barafku wuxuu isku daraa biyo iyo baraf, oo loo yaqaanno roobdhagaxyaale. Shilku wuxuu sababay in xoogaa lacag ah oo wanaagsan loo wareejiyo kiristaalo baraf ah iyo xoogaa tabar yar oo baraf ah.
Xilliga xaadirka ah ayaa kor u riixaya kiristaalo baraf -ka -khafiif ah oo kor u kaca wuxuuna sababaa in kharashaad togan laga dhiso xagga daruuraha gadaashiisa. Ugu dambayntii, saamaynta cufnaanta Dhulku waxay keentaa in roobabku uu ku soo dhaco lacag aan fiicnayn, maxaa yeelay roobkii dhagaxa ahaa wuu sii cuslaanayaa marka uu u soo dhowaado bartamaha iyo gunta daruurta. Kala -soocidda iyo isu -uruurinta lacagtu way sii socotaa ilaa ay suurtogal noqoto inay ku filnaato bilowga dheecaan.
Mala -awaal kale oo ku saabsan habka kala -soocidda ayaa leh laba qaybood. Aan aragno waxay yihiin:
Dhibicda barafka iyo dhibcaha biyuhu waxay noqdaan kuwo dabacsan marka ay ku dhacaan dhulka korontada dabiiciga ah ee dhulka.
Qurubyada barafka ee dhacaya ayaa isku dhaca waxaana lagu soo dallacaa induction electrostatic.
Sida shucaaca loo sameeyo iyo noocyada kala duwan
Hillaaca ugu badan. waa inta ugu badan ee la arko, oo loo yaqaan hillaaca xariiqa. Kani waa qaybta muuqata ee baafinta raajada. Badankoodu waxay ku dhacaan daruuraha sidaas darteedna lama arki karo. Aan aragno waxa ay yihiin noocyada ugu waaweyn ee shucaaca:
Hillaac daruur-ka-dhul ah: waa kan ugu caansan iyo kan labaad ee ugu caansan. Waa halista ugu weyn ee naf iyo maalba leh. Waxay ku dhufan kartaa dhulka waxayna ku shubi kartaa inta u dhexeysa daruurta cumulonimbus iyo dhulka.
Pearl Ray: kani waa hillaac daruur-dhulka u muuqda oo u kala qaybsan taxane ah qaybo gaaban oo dhalaalaya.
Hillaac Staccato: Kani waa hillaac kale oo daruur-ilaa-dhulka ah oo gaaban oo u muuqda inuu yahay tooshka keliya. Caadi ahaan waa mid aad u dhalaalaya oo saamayn weyn leh.
Dogob farmaajo: waa falaarahaas daruur ilaa dhul ah oo muujiya jajabka wadadooda.
Hillaaca dhulka daruuriga ah: waa dheecaan u dhexeeya dhulka iyo daruurta oo ka bilaabmaysa istaroog kor u kaca bilowga ah. Waa dhif iyo naadir inay tahay.
Daruur ilaa hillaac daruur ah: wuxuu ka dhacaa inta u dhaxaysa aagagga aan dhulka la xiriirin. Waxay badanaa dhacdaa marka laba daruurood oo kala duwan ay abuuraan farqi xagga awoodda korantada.
Waxaan rajaynayaa in xogtan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida shucaacu u samaysmo, sifooyinkooda iyo noocyada kala duwan ee jira.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Sida shucaaca loo sameeyo
Waa maxay roob